Araaraa fi Jijjiirama Eegalame Milkeessuuf Wal Amanuu fi Wal Irratti Abdachuu Feesisa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAraaraa fi Jijjiirama Eegalame Milkeessuuf Wal Amanuu fi Wal Irratti Abdachuu Feesisa
(Ijioo Dubbii ABO – Hagayya 18, 2018)
(SBO/VOL – HAGAYYA 18, 2018) — Waliigalteen Hagayya 07, 2018 ABO fi Mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame ummata keenya keessatti gammachuu daangaa hin qabne uume. Erga sanaa as ummatni keenya hanga miira isaa tohachuu dadhabutti biyya keessaa fi biyyoota alaattis haala gara garaatiin gammachuu isaa ibsachaa jira. Kun mallattoo Nagaa fi Araaraa ti. Dheebuu Bilisummaa kan baroota dheeraa keessaa madda.
Haa tahu malee waliigaltee araaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa kana humnootni gufachiisuuf tattaafatan hedduu tahuu ABOn ni hubata. Humnootni fedhii siyaasaa gara garaa kan faallaa gaaffii Haqaa fi Bilisummaa ummata keenyaa tahe qabatanii sossohan hedduu dha. Isaan keessaa gariin sirna cunqursaa fi saaminsaa waggoota 27 dabraniif madda rakkoo naannoo kanaa tahee ture itti fufsiisuuf kan dharra’ani. Kaan ammoo inumaa iyyuu sirna 1991 dura ture kan guutummatti mirga Sabootaa mulquu barbaadu deebisuuf kan abjootani. Haala haaraya uumame kana keessa gugachuudhaan osoo hin dalagne dafqa nama biraatiin jiraachuu tooftaa kan godhatan hedduunis dantaa dhuunfaa gartuu fi matayyaa ittiin guuttachuuf sochii hin feesisneen hawaasa odeeffannoo gahaa hin qabne dogoggorsuu akka danda’anis beekamuu qaba.
Yeroo ammaa sadarkaa Oromiyaattis tahe guutuu Itoophiyaa keessatti yakki adda addaa bifa gara garaatiin babal’achaa akka jiru hunduu ni hubata. Meeshaaleen lolaa seeraan alaa iddoo tokko irraa gara biraatti osoo geejjibamanii ummataan eeramanii tohannaa jala ooluun oduu guyya guyyaa tahaa dhufee jira. Maallaqni seeraan alaatis akkasuma. Daangaa Oromiyaa karaa Kibbaa, Bahaa fi Kibba-Bahaa, akkasumas, karaa Kaabaa humnootni hidhatan Oromiyaatti duulchifamanii lubbuun ummata keenya nagaadhaan jireenya isaa geggeeffatuu gar-malee galaafatamuun hin dhaabbanne. Lolli guyyoota shan dura Baha Oromiyaa naannoo Mayyu Mulluqqee fi Baabbileetti Humna Liyyuu Haayil Somaaleetiin lammiilee nagaa irratti geggeeffamee lubbuu namoota hedduu galaafate kanaaf ragaa guddaa dha. Akka hubannaa fi amantii ABOtti haallan olitti ibsaman kun hundi rakkinoota jajjaboo jijjiirama siyaasaa qabsoodhaan argame kanatti gufuulee gurguddoo tahuu danda’anii dha. Rakkinoota kana keessa waraana mootummaa keessaas dantaa adda addaaf kan keessatti qooda fudhatan jiraatuunis ummata irraa dhokataa miti.
Rakkinoota amma mul’achaa jiran kanas tahe rakkina kamuu kan jijjiirama qabsoodhaan argame kanatti gufuu tahan hunda sadarkaa Oromiyaattis tahe sanaan alattis Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Mootummaa Itoophiyaa, akkasumas Dhaaba OPDO wajjin furmaataa fi nagaa waaraa ummata keenyaafis tahe naannoo keenyaaf argamsiisna kan jedhu qaama waliigaltee araaraa ABO fi Mootummaa Itoophiyaa ti. Addi Bilisummaa Oromoo waliigalteen kun akkuma yaadamee fi hawwametti araara hunde-qabeessa tahe kan naannoo kanatti nagaa waaraa buusuudhaaf bu’uura tahuu danda’u argamsiisuudhaan akka milkaawuuf of kenniinsa ol’aadhaan hojjechaa jira. Hafuuruma kanaan hojjechuus itti fufa. Kana mirkaneessuufis jila hoggana ol aanaa keessatti argaman gara Finfinnee erguun keenya hubatamaa dha.
Haa tahu malee, guyyaa kaleessaa (Hagayya 17, 2018) haasaan Angawoota mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa dhagahame rakkinoota bu’uuraa jajjaboo kanneen jijjiirama dhufaa jirutti gufuu tahuu danda’an kana hunda maddiitti dhiisee sochii WBO, akkasumas sochii miseensotaa fi deggertoota ABO Oromiyaa keessatti mul’atu irraa yaadda’uun kan keessatti calaqqise ture jechuun ni danda’ama. Haalli kun hafuura waliigaltee ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame dagachuu fakkaata.
Dhimma kana irratti Hayyu-Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa raadiyoo BBC Sagantaa Afaan Oromoo wajjin guyyuma kaleessaa (Hagayya 17,2018) gaaffii fi deebii taasisanii jiru. Akka Jaal Daawud BBCdhaaf ibsanitti sochii ABO fi WBO ilaalchisee wanti shakkii uumuu danda’u ykn qaamotni quba qabeenya ABOtiin ala maqaa isaatiin badii dalagan yoo mul’atan sarara quunnamtii tolfatnee qabnuunii fi tooftaa itti waliin adda baafannu qaamotni lamaan (ABO fi Mootummaan Itoophiyaa) waliin tolfannee qabna jedhan. Osoo hariiroo fi waliigalteen akkasii jiruu jarjaranii miidiyaatti gadi bahanii bifa sanaan haasawuun shakkii fi yaaddoo ummata keessatti uumuu waan danda’uuf haala akkasii irraa of qusatuun barbaachisaa taha jennee amanna.
Hundaa olitti ammoo kan hunda keenya yaaddessuu fi waliinis irratti hojjechuu qabnu rakkinoota gurguddoo sadarkaa Oromiyaa fi sanaan alattis mumul’achaa jiran kan jijjiirama argamaa jiru gufachiisuu akeeka godhatan irratti tahuu qaba jenna. Rakkinootni xixiqqaanis sirnuma tolfatne keessatti kan irra aanaman malee yaaddoo kan uuman tahu jennee hin amannu. Keessumattuu dhimmi lola daangaa Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa kan guyya guyyaatti lubbuu lammiilee nagaa akka baala mukaatti harcaasaa jiru hundaa ol nu yaaddessuu fi hatattamaan furmaata argachuu qaba. Sanaaf ammoo waliigalteen araaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame dafee xumuramee gara hojiitti waliin tarkaanfachuun murteessaa taha jennee amanna.
Waan taheef, aangawootni mootummaa Itoophiyaas tahe kan mootummaa Naannoo Oromiyaa, akkasumas Hoogganootni OPDO sochiin ABO fi WBO abbaa jijjiirama kana fidee fi jijiirama dhufaa jiruu kanaa tahuu fi fiixa bahiinsa isaatiifis humna cimaa abdatamu malee yaaddoo tahuu akka hin dandeenye hubatanii garaa qulqulluudhaan ABO waliin hojjechuu akka itti fufan abdanna. Gama ABOnis haa tahu gama mootummaatiin qaamotni maqaa keenya dhahatanii jijjiirama kana gufachiisuuf sosso’an bakka itti shakkamanitti ammoo akkuma HD-ABO Jaal Daawud Ibsaa jedhan hariiroo fi daandii qunnamtii waliin tolfanne sanatti dhimma baanee wal hubachiisuu fi waliin furmaata itti gochuun salphaa dha.
Gama ummata keenyaatiinis jijjiiramni siyaasaa abdachiisaan amma argamaa jiru kun qabsoo hadhaawaa fi wareegama qaalii ilmaan isaatiin kan dhufe tahuu hubachuudhaan akka haalli kun duubatti hin deebineef miira tasgabbaawaa fi dammaqiinsa ol’aanaadhaan, akkasumas of irratti abdiidhaan fiixa bahiinsa isaa dhugoomsuu, hunda keenya akka tohatuu fi fuula duratti akka sosso’amu ABOn jabeessee dhaama.
Ibsa ABO Ajjeechaa Finfinnee fi Baahirdaaritti Mudate Irratti (Waxabajjii 23, 2019) Odeeffannoo gahaa maalummaa fi…
Duula Sanyii Dugguugaa fi Rorroo Oromiyaa fi Oromoo Irratti Raawatamaa Jiru Dura Dhaabbachuuf Qabsoo Keenya…